न्यूज सञ्जाल: » किन विवाद भइरहन्छ सुन्दरी प्रतियोगिताको ?
काठमाडौँ । मिस नेपाल २०१९ का लागि लिइएको अडिशनका क्रममा एक किशोरीप्रति निर्णायकमण्डलकी एक सदस्यले गरेको व्यवहारलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा निकै आलोचना र चर्चा भएको छ ।
ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा भाइरल भएको एउटा भिडिओमा निर्णायकमण्डलकी सदस्यले रुखो शैलीमा ती किशोरीलाई शृंगार किन नगरेको, चस्माको सट्टा कन्ट्याक्ट लेन्सको प्रयोग किन नगरेको जस्ता प्रश्न रुखो शैलीमा गरेको देखिन्छ ।
पछिल्लो यो घटनाले नेपालमा हुने गरेका विभिन्न सुन्दरी प्रतियोगिताको पक्ष र विपक्षमा पुनः बहस चुलिएको छ । सुन्दरी प्रतियोगिताको औचित्य देख्ने र नदेख्नेहरूबीच सामाजिक सञ्जालमा पनि दोहोरो वादविवाद भइरहेको छ । र, यसले कैयौँ प्रश्नलाई पुनः एकपटक सतहमा ल्याइदिएको छ । नेपालमा सुन्दरी प्रतियोगिताबारे किन विवाद हुन्छ, के यहाँ सुन्दरी प्रतियोगिताको औचित्य छैन ? जस्ता तर्कले चौतर्फी रूपमा ठाउँ पाएको छ ।
घटनापछि ट्विटरमा त ३लयmबपभगउबलमकतष्ििदबगतषग ि ट्रेन्डिङ (लोकप्रियमा)मै आएको छ । सोही सन्दर्भलाई लिएर ट्विटरमा सुष्मिता महर्जन लेख्छिन, ‘मैले जानेको मेकअप भनेको मस्करा र सानो टिका लगाउने मात्र हो । मेकअप हुँदा र नहुँदा पनि ममा आत्मविश्वास हुन्छ । के यो गलत हो ?’ गत वर्षकी मिस नेपाल शृंखला खतिवडाले पनि तस्बिरसहित त्यस्तै आशयको ट्विट गरेकी छन् । उनको आयस राम्री देखिन र आत्मविश्वास बढाउनका लागि शृंगारको आवश्यकता पर्दैन भन्ने छ । खतिवडाको आशय पनि त्यही छ ।
तर, अधिकारकर्मी गौतमले त्यसरी तर्क गरिरहँदा अर्कोथरीको के तर्क छ भने ‘वस्तुकरण’का लागि आफू तयार हुने वा नहुने कुरा धेरै हदसम्म त्यस्ता प्रतियोगिता अथवा पेसामा संलग्न हुने महिलामा पनि निर्भर गर्छ । बिबिसीबाट